एनसेलले ल्यायो ‘ह्याप्पी आवर अन रिचार्ज’, कसरी सुचारु गर्ने ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more एनसेलले ल्यायो ‘ह्याप्पी आवर अन रिचार्ज’, कसरी सुचारु गर्ने ?
फागुन १५ गते, २०७६ - ०९:४३
काठमाडौं । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले आफ्नो ‘अझै नजिकिन्छ सम्बन्ध’ योजनाअन्तर्गत ‘ह्याप्पी आवर अन रिचार्ज’ अफर ल्याएको छ । यो अफर अन्तर्गत ग्राहकले रु १०० र यस भन्दामाथिको प्रत्येक रिचार्ज बापत भ्वाइस सेवामा छुट प्राप्तगरी यसको फाइदा लिन सक्नेछन् ।
यो अफर यही बिहीबार (फागुन १५) देखि लागु हुनेछ । यस भ्यालेन्टाइन महिनाको अवसरमा संचालनमा ल्याईएको यो अफर अन्तर्गत एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले मात्र ९९ पैसा प्रतिमिनेट (कर सहित रु १.२६ पैसा) मा एनसेल नेटवर्कभित्र कुरा गर्न सक्नेछन् ।
भ्वाइस सेवामापाइने छुट बिहान ८ बजेबाट दिउँसो ३ बजेभित्रको समयमालागु हुनेछ । यस अफरबाट फाइदा लिनकालागि ग्राहकले एस्टिक्स १७१०६ ह्यास् डायल गरी आफुलाई अफरमा निःशुल्क रुपमा सहभागि गराउन सक्छन् ।
यसरी अफर सुचारु गरी सकेपछि ग्राहकले रिचार्ज रकमकाआधारमा भ्वाइस सेवामाविभिन्न समयसिमा रहेका छुटबाट लाभलिन सक्नेछन् । ग्राहकहरुले रु १०० रिचार्ज गर्दछन् भने ९९ पैसा प्रतिमिनेट छुटको लाभ ७ दिनका लागि पाउनेछन् । रु २००, रु ३०० र रु ५०० रिचार्ज गर्ने ग्राहकहरुले यो छुटको लाभक्रमशः १४ दिन, २१ दिन र ३० दिनका लागि लिन सक्नेछन् ।
यो अफर ९० दिन सम्म संचालनमा रहनेछ । ग्राहकले एस्टिक्स १७१०६ एस्टिक्स १ ह्यास् डायलगरी आफुले सुचारु गरेको अफरको समयसिमा सजिलै थाहापाउन सक्नेछन् ।
फागुन १५ गते, २०७६ - ०९:४३ मा प्रकाशित